Noocyada guntinnada guntimaha | Niman qurux badan
Alicia tomero | 28/11/2021 21:00 | Dhameystirka, fashion
Ragga jecel inay u labistaan ​​xarrago leh waxay haystaan nooca ugu fiican ee xirmooyinka iyo noocyada guntooyinka, in ay marsan karaan dharkooda. In kasta oo ay dhammaantood isku mid yihiin, mid walba waxay leeyihiin nooc u gaar ah iyo sida loo sameeyo.
Waxaan jecelnahay dhammaan qaababkeeda iyo qaar aad bay u gaar yihiin shakhsiyaadka aadka u caadiga ah ama munaasabadaha gaarka ah. Waxaad dooran kartaa guntinka guntimaha taas kugu habboon adiga iyo qaabkaaga. Waxaad sidoo kale baran kartaa sida wax ka badan hal guntin ku xidho si aanay mar walba isku mid rasmi ah u noqon oo ay u dambayso.
1 Xariggu qarniyo badan ayuu ragga xidhi jiray
2 Xarig Classic ah oo leh gunti caadi ah
3 Windsor gunti xidhid
4 Xarig laba jibaaran oo Ameerikaan ah
5 Ku xidh gunti St. Andrew
Xariggu qarniyo badan ayuu ragga xidhi jiray
Habka iyo wax ku biirintiisa ayaa had iyo jeer siin jiray xarrago, taasina waa sababta aan waligiis meesha looga saarin dharka nin. Waxay soo ifbaxday 1660kii oo xarunteedu qurxoon tahay Talyaaniga, aasaasaha fanka oo dhan. Markii hore waxa loo isticmaali jiray maro qoorta lagaga xidhi jiray dalka Faransiiska, markii dambena waxa ay horeba u rogtay qaabkeeda.
Maanta waxaan u fiirsan karnaa xidhid caadi ah oo gunti qoorta ah oo leh xadhig dheer oo weyn oo ku fidsan guntinkan hoostiisa, si loo siiyo taabashada bilicda. Hadda waa fashion in meel kasta oo aduunka ka mid ah ayaa laga sheegaa Oo waxaa lagu siin karaa qaab xarrago leh ama qaab caadi ah.
Xarig Classic ah oo leh gunti caadi ah
Sawirka ka yimid berecasillasgranada.com
Waa xidhidhka caadiga ah Midka aan u barannay inaan aragno, midka aan aad ugu naqaanno dhammaan fasallada bulshada iyo ku dhawaad ​​dhammaan moodooyinka. Muuqaalkiisu wuxuu siinayaa classicism-kaas mana shakin doono qaabkiisa sababtoo ah sida muuqata ka muuqda dukaamada oo dhan. Balaciisu wuxuu gaarayaa 7 sentimitir, wuxuu gaarayaa inuu daboolo badhamada shaadhka oo aan la siin qaybta dhexda.
guntinkeedu waa kan laga arko ku dhawaad ​​qoorta oo dhan si loo sameeyo waxaan raaci doonaa tallaabooyinka soo socda:
Waxaan dhignaa xariijinta iyadoo labada daraf ay isku soo jeedaan. Waxaan dhignaa qaybta cidhiidhiga ah ee midigta, qaybta ballaaran ee bidixda.
Waxaan u gudbin doonaa qaybta ballaaran ee midig ee qaybta cidhiidhiga ah, inta aan u leexineyno bidix iyo gadaal.
Isla mar ahaantaana waannu kor u qaadi doonnaa (oo gadaal ka sii wadi doona) oo waxaan ka dhigi doonnaa kor u kaca oo isla markaaba hoos u dhacaya, oo ku habboon guntimaha.
Ku adkee guntimaha adigoo cidhifyada hoos u jiidaya, adigoo labada qayboodba si adag u haya.
Windsor gunti xidhid
guntinkani waa mid ku habboon kuwa xidhidh balaadhan oo dhumuc leh. Waxay leedahay muuqaal gunti aad u la mid ah kuwa kale, laakiin waa la ogaan doonaa wuxuu leeyahay qaab adag, saddex xagal. Magaceedu wuxuu ku yimaadaa sharafta Duke of Windsor, kaasoo si fiican u matalay gunti noocan oo kale ah.
Waxaan ku dhejinnay qoorta qoorta. Labada xadhig waa inay ku dhacaan dhinacyada. Cidhifka cidhiidhiga ah wuxuu aadi doonaa midigta, cidhifka ballaadhanna wuxuu tegi doonaa bidixda.
Waxaan ka gudubnay xariijinta ballaaran ee cidhiidhiga ah, waxaan u gudbineynaa gadaal oo aan mar kale u gudubnay, oo u leexinnay midig.
Mar labaad ayaanu dib ugu soo celinaa, anagoon fuulinna bidixda ayaan u leexanaynaa.
Hadda waxaan kor u qaadi karnaa si aan ugu gudubno meel u dhow guntinta, laakiin u soo jeedinta iyo bidixda.
Waa inaad u wareegtaa si aad isku daydo inaad daboosho guntinka, waanu rogi doonaa leexashada anagoo u leexinayna midig si aad dib ugu dhameysato oo aad kor ugu qaaddo.
Marka xagga sare la joogo, waxaanu ka dhigi doonaa inuu ka soo galo guntinka oo aanu hoos u dhigno annaga oo si adag u adkeynayna dhammaan qalabka.
Xarig laba jibaaran oo Ameerikaan ah
Nooc ka mid ah guntinku wuxuu aad ugu eg yahay gunti fudud, laakiin laba jeer u rogaya guntinka. Waxaan ku dhejineynaa qoorta qoorta oo labada daraf hoos u dhacaan, kan ugu ballaaran ee midig.
Waxaan u gudubnaa qaybta ballaaran ee bidixda iyo dhinaca kale.
Dib ayaanu u celinaynaa, anagoo ka gudubnay cidhifka kale oo u leexinay bidixda, fikradu waa in aan si buuxda u leexanno oo hore u dhaafno si aan mar kale uga gudubno gadaal.
Marka dib loo soo celiyo, waxaan kor u qaadeynaa xariijinta ballaaran ee sare oo hoos u dhig si ay u gasho guntimaha. Laga soo bilaabo halkan mar hore ayaa lagu dhejin doonaa waxaanan adkeyn doonaa dhammaan guntimaha si wadajir ah.
Ku xidh gunti St. Andrew
Waa a gunti cabbir dhexdhexaad ah oo mug yar leh marka loo eego habka dhaqanka. Runtii waxay u egtahay mid simmetrical ah waxayna ka duwan tahay gunti fudud iyadoo qaadaysa hal leexasho oo kale.
Waxaan ku bilaabi doonaa labada qaybood ee qoorta laga saaray labada dhinac ee qoorta. Midka ballaaran waxaan dhigeynaa dhanka bidix, waxaanan siin doonaa hal leexo oo ka dambeeya kan cidhiidhiga ah si uu horay iyo bidix ugu leexiyo.
Dhanka bidixda, waxaan ka dhigi doonaa in ay ka soo gudubto hore iyo korka, ka dhigaysa in ay hoos ugu dhaadhacdo gunti la samaynayo.
Mar labaad ayaanu ku tuuraynaa oo mar kale horteeda u gudbinayna midigta. Laga soo bilaabo midigta waxay u noqon doontaa kor iyo dib. Marka uu mar kale soo dhaco waa inuu galaa inta u dhaxaysa guntinka halkaasna waanu adkaynaynaa si uu u adkaysto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Noocyada guntinnada guntimaha